आज अभिनेत्री पुजा शर्माको जन्मदिन, कतिवर्ष पुगिन् ? – Dailny NpNews
आज अभिनेत्री पुजा शर्माको जन्मदिन, कतिवर्ष पुगिन् ?
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख १७, २०७८ समय: १०:११:५६
पछिल्ला समयमा नेपाली फिल्म जगतमा चर्चामा रहेकी अभिनेत्री पुजा शर्माको आज जन्मदिन परेको छ । उनी ३० औँ बसन्त पार गरी ३१ औँ बसन्तमा प्रवेश गरेकी छन् । उनी ‘थ्री लभर्स’ नामक फिल्मबाट याे क्षेत्रमा आएकी हुन् । उनी ‘प्रेम गीत’ ‘राम कहानी’ को सफलतापछि निकै चर्चाको शिखरमा पुगिन् ।
जन्मदिनको अवसरमा उनलाई सामाजिक संजालमा सुभकामना दिनेहरूको ओईरो लागेको छ । बेलाबखत विवाद र आलोचनाको भुमरिमा परिरहने शर्मा पछिल्लो समय मिडियामा अभिनेता आकाश श्रेष्ठसंग प्रेम सम्बन्धका कारण पनि चर्चामा छिन । तर, प्रेमका बारेमा यी दुबैले कुरा भने खुलेर भनेका छैनन् ।
‘म यस्तो गीत गाउँछु’ र ‘राम कहानी’ मार्फत फिल्म निर्माणमा समेत हात हालेकी उनी एक सफल अभिनेत्रीको चिनिएकि छन् । उनको फिल्म ‘म यस्तो गीत गाउँछु–२’ रिलिजको तयारीमा थियो तर कोरोना भााइरस संक्रमण रोक्न गतवर्ष जारी लकडाउनसँगै अनिश्चित कालको लागि रिलिज मिति स्थगित भएको छ । हालसम्म पनि कोरोनाको कहर नरोकिएकाले फिल्मको अत्तोपत्तो छैन ।